Vaccines for kittens - purogiramu
Imba Zvipfuwo zvinobvumirwa
Kese chero ipi zvayo, pasinei nokuti iri mumusha kana mumugwagwa, inogona kurwara. Nokudaro, zvirwere zvokudzivirira zvekitten uye makati makuru - chiyero chemhosva, kuchengetedza hutano hwavo uye kunyange hupenyu.
Paunouya nekidiki kadiki kokutanga kuona chiremba wezvokurapa, chiremba anofanira kutarisa hutano hwehutano uye ega purogiramu yezvirwere zvechechi, kubva kwaunogona kuwana kuti majekiseni epakutanga anoitei kune kittens uye nguva yekufamba kwavo.
Nenguva ipi yekupa vacheche?
Mushonga wokutanga unofanira kupiwa kumucheche ane mavhiki 8-12. Achadzivirira mwana kubva kuhutachiona rhinotracheitis, panleukopenia uye calciviroza . Nokuda kweizvi, zvirwere zvakawanda zvakadai seNobivac Tricat, Multifel uye zvimwe zvinogona kushandiswa.
Chirwere chechipiri chekate ndeye revaccination, iyo inoitwa mumavhiki matatu ane chirwere chimwe chete. Panguva imwecheteyo, unogona kuita chikafu uye inoculation kurwisa rabies.
Chirwere chechitatu chinopiwa chikwere chakakura mumwedzi gumi nemaviri, uye chinotevera chakaita gore negore, zvichida panguva imwe chete, kana mwedzi mumwe chete zvisati zvaitika, sekupedzisira kushandiswa. Purogiramu yezvokugadziriswa nechiremba wemhuka inosarudzwa mumwe nomumwe kumhuka imwe neimwe, zvichienderana nerudzi rwekugadzirira kunoshandiswa kurwisa.
Kushanda mishonga yakasimba inogadzirwa mumucheche kwemazuva anenge gumi. Nokudaro, panguva ino, unofanirwa kuve nechokwadi chokuti mwana haasi supercooled, hazvikurudzirwi kubudisa mumugwagwa, uyewo kushambidza.
Kana mukati kana mukati mukuru ane ruzivo nemhuka inorwara inonyatsozivikanwa, chiremba wezvokurapa anogona kuisa sarum hyunimune. Izvo zvakagadzirirwa zvakagadzirirwa zvirwere zvinokonzerwa nehutachiwana zviri mukati maro zvichabatsira kuchengetedza kuzvidzivirira kwemhuka kwemavhiki anenge maviri.
Pakukumbira komuridzi, chigoni chinogona kupemerwa uye kubva kune mhondi ine revaccination muvhiki mbiri.
Pamberi pemishonga, mukate unofanira kuva wakakwana. Mukuwedzera, zvakakosha kuitisa de-worming of the kitten uye kubvisa fles kubva kwayo.
Aquarium hove yebhuruu dolphin
Vangani dachshunds vanogara?
Nzira yekudzidzisa sei mwana kuti asvike?
Nzira yekugunura imbwa yakazara nemaoko avo pachavo?
Otitis muimbwa - zviratidzo uye kurapa
Mutungamiri wemhuka yegwasi
Guinea shiri - kubereka
Weimaraner - tsanangudzo yemarudzi
Rudzi rwembwa dzegreyhound
Shrimp zviri mumvura
Diseases of gourami
Degou - kuchengetedza nekuchengetedza pamba yeChilein protein
Anoenda nekottage cheese kubva mbiriso chingwa
Endineri endometrium - zvinokonzera
Ihotera iri yakasiyana sei ne motel?
Samui Weather by Mwedzi
Urinary retention and absence of urination
Ndeupi ruvara bvudzi riri mumafashoni 2015?
Hats zvipfeko zvevasikana vechidiki
Huchi keke pate rinopisa
Mushroom soup ane meatballs - recipe
Mvere dzvuku - spring-chirimo 2014
Zviratidzo zveperesia palsy muchechecheche
Nyw mapiritsi - vari kurevei pamusoro pemirayiridzo?
Britney Spears naJustin Timberlake
Pityriasis - zvinokonzera uye zvakanakisisa kurapwa kwema funguszuva
Nzira yekuita cheese pamba?